‘मर्निङ वाक’ नगर्नु बेस, हृदयघातको खतरा बढी - VOICE OF NEPAL
‘मर्निङ वाक’ नगर्नु बेस, हृदयघातको खतरा बढी
२६ माघ २०७५, शनिबार १७:१५ 209 ??? ???????
जाडो मौसम मुटुका रोगीहरुको लागि निकै खतरनाक हुन सक्छ । यो मौसममा चिसोसँग बच्न नसक्ने हृदयघातको समेत खतरा हुने विज्ञहरुले औंल्याएका छन् ।
मुटुको समस्या भएका मानिसहरुले यी दिनमा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ । यो मौसममा चिसो हावाले शरीरको गर्मीपनालाई खोसेर लैजान्छ र रक्तनलीहरु खुम्चिन थाल्छन् । यसको असर मुटुमा रगतको आपूर्ती गर्ने धमनीहरुमा पनि पर्छ । त्यसैले मुटुरोगीहरुलाई हृदयघातको खतरा बढ्छ ।
बिहानको हावा हानिकारक
एक अध्ययनअनुसार बिहानको समयमा शरीरका रक्तनलीहरु संकुचित हुन्छन् । यस क्रममा हावामा पाइने धुवाँ र यसको खराब गुणले हृदयघातको जोखिम दुई गुणा हुन सक्छ ।
चिकित्सकहरुका अनुसार चिसोमा हावाको गति कम हुन्छ र आद्रताको स्तरमा वृद्धि हुन्छ । जसले गर्दा हावामा प्रदुषण बढ्न थाल्छ, किनभने प्रदुषित तत्व हावामा तलै रहन्छ, यताउता फैलन पाउँदैन ।
यहि प्रदुषित वायुमा भएका स-साना हानीकारक कणहरु सासको माध्यमले मुटुसम्म पुगेर मानिसलाई नोक्सान पुर्याँउछ ।
जाडोयामको सुरुवाती दिनमा तुँवालो लाग्नु सामान्य हो । विशेषज्ञका अनुसार खोकी, घाँटी पोल्ने, आँखा पोल्ने, दम, फोक्सोको रोगलगायतको खतरा पनि बढाउँछ ।
चिसो मौसममा प्रदुषणका कारण उत्पन्न भएका हानीकारक कणहरु जमिनको नजिकै घेरिएर रहेका हुन्छन् । यसले सास फेर्नमा समस्या र छातीमा संक्रमण पैदा गर्छ । उच्च रक्तचापको समस्या पनि हुन्छ ।
शरीरमा भिटामिन डीको कमी, कोलस्ट्रोल स्तर बढ्ने, रगतको आपूर्ति, रक्तसञ्चारमा गडबडी, पसिना नआउने र फोक्सोमा अतिरिक्त पानी जम्मा हुने जस्ता कारणले हृदयघातको जोखिम उच्च बनाउँछ ।
हृदयघातबाट बच्नको लागि हामीले यसको संकेततर्फ ध्यान दिनुपर्छ । छाती पोल्ने, बेचैनी हुने, लगातार रक्तचाप उच्च रहने, हात दुखेर छातीसम्म पुग्ने आदि यसका लक्षण हुन् ।
जुन अनुपातमा तपाईं पानी पिइरहनुहुन्छ, त्यसको तुलनामा पिसाब आएको छ कि छैन त्यो पनि विचार गर्नुहोस् । धेरै पानी पिउँदा पनि पिसाब कम आएको छ भने यसको मतलब फोक्सोमा अतिरिक्त पानी जम्मा भइरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा ढिलो नगरी तुरुन्त डाक्टरसँग जाँच गराउनुहोस् ।
चिसो मौसममा हृदयघातबाट आफूलाई बचाउनको लागि तपाईंले निम्नअनुसारका सावधानीहरु अपनाउन सक्नुहुन्छ ।
१. आफैलाई न्यानो बनाउनुहोस्
चिसो मौसममा आफूलाई न्यानो कपडाले बेरेर राख्नुहोस् ताकि शरीरमा गर्मी पैदा होस् । तातोका लागि टाउकोमा टोपी, हातमा पन्जा र खुट्टामा मोजा लगाउनुहोस् ।
२. बिहानै चिसोमा नहिँड्नुस्
बिहान-बिहान घरबाट बाहिर निस्कन बन्द गर्नुहोस् । जाडो मौसममा मर्निङ वाक हानिकरक हुन्छ । चिसो र प्रदुषित हावा सासको माध्यमले शरीरमा जाने खतरा हुन्छ । घाम लागिसकेपछि वा दिउसोको समयमा घरबाट बाहिर निस्कनुहोस् । यो मौसममा वृद्धवृद्धा र बच्चाहरु बिहानै चिसोमा पैदल हिँड्नबाट बँच्नुपर्छ ।
३. मदिरा नपिउनुहोस्
चिसोमा अल्कोहलको सेवनले हृदयघातको खतरा बढाउन सक्छ । किनभने यसले बाहिर गर्मी महसुस गराउँछ तर भित्री अंगहरुमा चिसो हुन्छ । जसले हृदयघातको खतरा बढ्छ ।
४. खानुहोस् पौष्टिक आहार
मानिसहरु जाडोमा तात्तातो तारेका खाना, लोकल घिउ, माछा-मासु, सुप, उच्च प्रोटिनययुक्त खाद्यपदार्थको सेवन धेरै गर्छन् । तर, यस्ता चीजहरु स्वास्थ्यको लागि हानीकारक हुन्छन् किनभने यस्ता खाना पच्न धेरै समय लाग्छ ।
धेरै शारीरिक श्रम नगर्नाले जाडोमा पाचन क्रिया बिग्रन्छ र कोलस्ट्रोल बढ्ने सम्भावना पनि धेरै हुन्छ । त्यसैले जाडोमा हल्का र सन्तुलित भोजन खानुहोस् ।
५. घरमै गर्नुहोस् योगा र व्यायाम
चिसोमा बिहानै घरबाहिर गएर व्यायाम गर्नु वा मर्निङवाक गर्नुुभन्दा घरमै एक्सरसाइज गर्नुहोस् । घरमै बसीबसी तपाईं योगा, मेडिटेसन र वर्कआउट गर्न सक्नुहुन्छ ।
वैवाहिक जीवन अन्त्य हुनसक्ने कारण यस्ता छन् , समयमै ध्यान पुर्याउने कि ?